နှလုံး ကျန်းမာရေးကောင်းအောင် ဘာတွေလုပ်လို့ရနိုင်မလဲ? -
နှလုံး ကျန်းမာရေးကောင်းအောင် ဘာတွေလုပ်လို့ရနိုင်မလဲ?
လူတစ်ယောက်မှာ မွေးထဲက သေဆုံးတဲ့ထိ မရပ်မနားအလုပ်လုပ်နေရတဲ့ အပင်ပန်းဆုံး ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းလေးက ” နှလုံး” ပါပဲ။
နှလုံးလေး နေမကောင်းဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်း ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အခြားအစိတ်အပိုင်းတွေက ယိုယွင်းလာတာပါပဲ။ လူတွေ နေ့စဉ်စားသောက်နေရတဲ့ အစားအသောက်၊ အနေအထိုင်တွေက နှလုံးကျန်းမာရေးကိုအများကြီးထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ နှလုံးရောဂါကြောင့်သေဆုံးတဲ့ လူဦးရေဟာ ၁၈.၆ သန်းရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် မိမိတို့ရဲ့နှလုံးကို ဂရုစိုက်ဖို့ ဘာလေးတွေ စားသောက်ပြီးဘာလေးတွေရှောင်ကြမလဲ? အောက်မှာပြထားတဲ့ ပုံလေးတွေမှာ တစ်ခုချင်းစီဖတ်ကြည့်ရအောင်ပါ။
ပြည့်ဝဆီတွေ၊ ခဏခဏပြန်ကြော်ထားတဲ့၊အပူနဲ့ထိတွေ့ထားတဲ့ အသွင်ပြောင်းဆီတွေကို တတ်နိုင်သလောက်ရှောင်ရပါမယ်။ မာဂျရင်းတွေ၊ ထောပါတ်တွေ၊ တိရိစ္ဆာန်က ရတဲ့အဆီတွေ စတာတွေကို တတ်နိုင်သလောက်လျှော့စားပြီး နှလုံးကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုတဲ့ဆီ ( ဥပမာ – သံလွင်ဆီ, နေကြာဆီ ) လိုမျိုးကို ပိုပြီး သုံးစွဲပေးပါ။
၂။ ပရိုတင်း ခေါ် အသားဓါတ်
တကယ်တော့ ကြက်အူချောင်းတွေ၊သုံးထပ်သားတွေ၊ ကလီစာလိုမျိုးတွေက နှလုံးကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူမပြုပါတဲ့ အတွက်လျှော့စားရပါမယ်။
ငါးတွေမှာတော့ Omega3ဖက်တီးအက်ဆစ်ပါဝင်တဲ့ အတွက် နှလုံးကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ဒါကြောင့်ငါး၊ ကြက်သား၊ ကြက်ဥ၊ အဆီထုတ်ထားတဲ့ နွားနို့တွေ၊ ပဲတွေကို အသားဓါတ်ရအောင် စားသုံးသင့်ပါတယ်။
အလွန်အမင်းဖွတ်ထားတဲ့ ဆန်တွေ၊ စားမယ့်အစား Whole Grains ကရတာတွေ ဆန်လုံးညိုတွေ၊ Oatmeal တွေစတာတွေမှာ အမျှင်ဓါတ်တွေ အများကြီးပါတဲ့ အတွက် ကိုလက်စရောကျစေပြီးနှလုံးကျန်းမာရေးကိုလည်း အထောက်အကူပြုပါတယ်။
အသီးအနှံတွေမှာ ဗိုက်တာမင်နဲ့ သတ္တုဓါတ် အပြင် အမျှင်ဓါတ်တွေအများကြီး ပါတဲ့အတွက် နှလုံးကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုပါတယ်။ တစ်နေ့ကို တရုတ် ပန်းကန်လုံးနဲ့ ၄ ခွက်လောက်စားပေးသင့်ပါတယ်။
၅။ ဒါ့အပြင် ဆားကို တစ်နေ့အတွက် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်းစာလောက်ပဲ စားတာမျိုးလျှော့စားရပါမယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကိုလည်း ပုံမှန်လေးအတွင်းဝင်အောင် ထိန်းထားသင့်ပါတယ်။ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလည်း ပုံမှန်လေးလုပ်သင့်ပါတယ်။
( ဆား နဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်အကြောင်း အသေးစိတ်ကိုတော့ Hope Telecare Myanmar Page မှာ အရင်က တင်ဖူးတဲ့ စာလေးတွေမှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ )
Nov 2, 2021 Diet and Nutrition, Health, Health Tips